गलत रिपोर्ट दिने डाक्टर निलम्बित • nepalhealthnews.com
जनस्वास्थ्य सरोकार ,काठमाडौं || प्रकाशित मिति :2018-10-11 06:40:23
गलत रिपोर्ट दिने दुई डाक्टर निलम्बनमा परेका छन्। धनुषाकी एक बलात्कृत बालिकाको शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सकद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहले गलत रिपोर्ट दिएका थिए। त्यसैले उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जानकारी दिएको छ।
फरकफरक स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छानबिन गरी वास्तविकता पत्ता लगाई गलत प्रतिवेदन दिने डाक्टरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काउन्सिलमा पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा डा. हरिहर वस्ती र डा. मधु तुम्बाहाम्फे र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव पुष्करराज नेपालसहितको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। अन्नपुर्णपोष्टबाट